- "သင့်အတွက် ကျော်ကြားသော အားကစားများနှင့် နောက်ဆုံးရ အားကစားသတင်းများ"
ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ဘယ်အတိုင်းအတာ အထိ အောင်မြင်နိုင်မလဲ ဆိုတာ ပြောကြားသွားတဲ့ #ပေါ်လစ္စတာ
Aug 16, 2019 MMSportNews
ပရီးမီးယား လိဂ် အပြောင်း အရွှေ့ ရာသီ ပိတ်သိမ်း သွားခဲ့ ပေမယ့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ အားထား ရတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဂ်ဘာ ရဲ့ အနာဂတ် ဟာ အခု ထက်ထိ ယူနိုက်တက် မှာ ဆက်ရှိ ဖို့ ရာနှုန်းပြည့် သေချာ ရေရာ ခြင်း မရှိ သေး ပါဘူး ။ ဒါ့ကြောင့် ယူနိုက်တက် ပရိသတ် အချစ်တော် ဂယ်ရီ ပေါ်လစ္စတာ က ပြင်သစ် လက်ရွေးစင် ရဲ့ ခြေစွမ်း တွေကို ပုံမှန် ထိန်းသိမ်း ထားနိုင် ခဲ့မယ် ဆိုရင် တစ်နေ့မှာ ပေါ့ဂ်ဘာ ဟာ ကမ္ဘာ့
မက်ဆီကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ အံ့မခန်း နည်းလမ်းတခုအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် ကစားသမားဘက်ကလက်မခံခဲ့ဖူးလို့ ဝန်ခံလိုက်တဲ့ #မန်စီးတီးဥက္ကဌ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အစီအစဉ် တခုမှာ BBC နဲ့ Sky sports တို့ရဲ့ ဘောလုံးဝေဖန်သူ အမျိုးသမီး အဲလက်စ်စကော့က မက်ဆီအနေနဲ့ နည်းပြကြီး ဂွာဒီယိုလာရဲ့ လက်ရှိ မန်စီးတီး အသင်းမှာ ပါဝင်ခွင့်ရဖို့ မသေချာဘူးလို့ ပြောဆိုမိ ခဲ့လို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေကို ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဘလွန်းဒီအောဆု ၅ဆုရှင် မက်ဆီအနေနဲ့ ဆရာဟောင်း ဂွာဒီယိုလာရဲ့ မန်စီးတီးအသင်းမှာ ပါဝင်လို့ ရနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်တဲ့ အဆိုပါ မှတ် ချက်အပေါ် ဒီအာဂျင်တီးနား သားရဲ့ ပရိသတ်တွေက ပေါက်ကွဲဝေဖန်ခဲ့ လို့ အဲလက်စ်စကော့အနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသေးတယ်။ စကော့ က သူမရဲ့ တွစ်တာအကောင့်ကနေ – ” ယနေ့ ခေတ် မန်စီးတီး
ချယ်လ်ဆီးအသင်းသည် အ သင်း၏ ဘယ်တောင်ပံခံစစ်ပိုင်းကို အားဖြည့်ရန်အတွက် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်း၏ ဘယ်နောက်ခံလူ အဲလက်စ် ဆန်ဒရိုနှင့် စပါးအသင်း၏ ဘယ် နောက်ခံလူ ဒန်နီရို့စ်တို့အား ပစ်မှတ် ထားနေကြောင်း သိရှိရသည်။ ဒန်နီရို့စ်သည် မန်ယူအသင်း၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းကမူ အဲလက်စ်ဆန်ဒရိုအား ခေါ်ယူရန်အဆင် မပြေပါက ဒန်နီရို့စ်ကို ကြိုးပမ်းရန် စီ စဉ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် နွေရာသီအ ပြောင်းအရွှေ့ကာလက အဲလက်စ် ဆန်ဒရိုအတွက် ပေါင် (၆၅)သန်းတန် ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုအချိန်တွင်လည်း ချယ်လ်ဆီးအသင်း က ထပ်မံကမ်းလှမ်းရန် စီစဉ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒန်နီရို့စ်မှာမူ စပါးအသင်းတွင် ပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲ အသင်းဖော် ဘင်ဒေးဗီးစ်နှင့် အလှည့်ကျပွဲထွက် ခွင့်သာရရှိနေသဖြင့် အသင်းမှထွက် ခွာရန် ဆန္ဒရှိနေသည်ဟု သတင်းများ
LETHWEI ALLSTAR FIGHT
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁၈ (ပြာသလိုလဆန်း ၁ရက်နေ့) ဟာ ကရင်သက္ကရာဇ် ၂၇၅၇နှစ်မြောက် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များ ကျင်းပဆောင်ရွက်ရာမှာ ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲများကိုပါ နိုင်ငံ ဒေသ အနှံ့အပြားမှာ ပါဝင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်တတ်ကြတာမို့ ဒီကာလ၀န်းကျင်မှာ ဖြစ်နေမယ့် ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲများဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို လက်လှမ်းမီ ကြားသိရှိရသလောက် စုစည်းပြီး ပြန်လည်ဝေမျှပါတယ်။ (Re-post) . >> အင်းစိန် << “ကရင်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ရိုးရာလက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲကြီး” နေ့- ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၁၈ အချိန်- နေ့စဉ် မွန်းလွဲ ၂း၀၀ နေရာ- အင်းစိန်မီးရထားဘောလုံးကွင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ . >> ပုသိမ် << “ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ် ရိုးရာလက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီး” နေ့- ဒီဇင်ဘာ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ အချိန်- ညစဉ် ၇း၀၀
Photo: Daily Mail ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်(၁၈) စနေညနောက်ဆုံးပွဲအဖြစ် မန်စီးတီးနဲ့ စပါးအသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမှာ မန်စီးတီးက (၄-၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ တိုက်စစ်မှာ အဂွဲရိုး၊ ဆာနေး၊ စတာလင်၊ ကွင်းလယ်မှာ ဂွန်ဒိုဂန်၊ ဖာနန်ဒင်ဟို၊ ဒီဘရိုင်းနား၊ နောက်တန်းမှာ ဒဲလ်ဖ်၊ မန်ဂါလာ၊ အော်တာမန်ဒီ၊ ဝေါ်လ်ကာတို့နဲ့ ပွဲထွက်လာခဲ့ပြီး စပါးကတော့ တိုက်စစ်မှာ ဟာရီကိန်းနဲ့ ဆွန်ဟောင်မင်၊ ကွင်းလယ်မှာ အယ်လီ၊ အဲရစ်ဆင်၊ ဟာရီဝင့်ခ်၊ ဒမ်ဘီလီ၊ နောက်တန်းမှာ ဒန်နီရို့စ်၊ ဗာတွန်ဂန်၊ ဒိုင်ယာ၊ ထရစ်ပီယာတို့နဲ့ ပွဲထွက်လာပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ အရင်ပွဲတွေလောက် ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမရခဲ့ပေယ့် အခွင့်အရေးများစွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးပြတ်အနိုင်ရခဲ့တာပါ။ မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ဂိုးတွေကို ဂွန်ဒိုဂန် (၁၄မိနစ်)၊ ဒီဘရိုင်းနား (၇၀ မိနစ်)၊
ထိုငျးနှငျ့ပှဲ အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုဘုနျးသစ်စာမငျးရရှိဖိတျချေါပွိုငျပှဲ ပထမဆုံးသှငျးဂိုးဆု တိုကျစဈမှူးအီစိုးရရှိ
အကောငျးဆုံးကစားသမားဆုရခဲ့သညျ့ ဂိုးသမား ဘုနျးသစ်စာမငျး။ ဓာတျပုံ-ဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျ မွနျမာယူ-၂၁ လကျရှေးစငျ ဂိုးသမား ဘုနျးသစ်စာမငျးသညျ ဒီဇငျဘာ ၁၄ ရကျက ယှဉျပွိုငျခဲ့သညျ့ ထိုငျးယူ-၂၁ အသငျးနှငျ့ပှဲအပွီး တှငျ ယငျးပှဲစဉျ၏ အကောငျးဆုံးကစားသမား ဆုရရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါပှဲစဉျတှငျ ဂိုးသမားဘုနျးသစ်စာ မငျးမှာ ထိုငျးကစားသမားမြားသှငျးယူသညျ့ အပိုငျဂိုးသှငျးခှငျ့မြားကို လကျစှမျးပွကာကှယျ နိုငျခဲ့သောကွောငျ့ ယငျးဆုကိုရရှိခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုအပွငျ မွနျမာယူ-၂၁ အသငျးတိုကျစဈမှူး အီစိုးသညျလညျး ဖိတျချေါပွိုငျပှဲ၏ ပထမဆုံး သှငျးဂိုးဆုကို ရရှိခဲ့သညျ။ အီစိုးသညျ ဒီဇငျဘာ ၁၂ ရကျက ယှဉျပွိငျခဲ့သညျ့ ဗီယကျနမျယူ-၁၉ အသငျးနှငျ့သရကေခြဲ့သညျ့ပှဲတှငျ မွနျမာအသငျး အတှကျ အဖှငျ့ဂိုးကိုသှငျးယူပေးခဲ့သညျ။ ဗီယကျနမျသတငျးစာ ဖိတျချေါယူ-၂၁ ပွိုငျပှဲကငျြးပရေးကျောမတီသညျ ပှဲစဉျအလိုကျ အကောငျးဆုံးဆုမြားကို ရှေးခယျြပေးအပျလကျြ ရှိကွောငျး သိရသညျ။ ယငျးပွိုငျပှဲကို ဒီဇငျဘာ
BATTLE FOR GLORY 6-1-2018
Dec 14, 2017 MMSportNews
6-1-2018 1;00 pm @ TaunGoo ဒီရက်မှာ ဒီပွဲလေးရှိတယ် တောင်ငူသား “ထွန်းနိုင်ဦး”အတန်းတက်စာမေးပွဲကို မွေထိုင်းကဝိ “ပါဝိ” နဲ့စစ်မှာမို့ ဒေသခံလူထူက စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ် နတ်ရွာသား “ခွန်ဉာဏ်လင်းအောင်” ကလဲ မြန်မာကစားတွေရဲ့ပြိုငိဖက် “ဖာ့မွန်ခွန်း” နဲ့ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်သလို နတ်ရွာသား ခွန်လင်းထက် က အစွယ်ချွှန်လို့ နယ်ကျွှံလာတဲ့ ရွှေမန်းမြေက “ဖိုက်ကေ” ကို ဧည့်ခံမှာဖြစ်ပီး မန်းလေးသား “ငွေနန်းတော်” နဲ့ ရွှေဘားလားပဲ့ကိုင်ရှင် ချန်ပီယံဟောင်းရွှေဝါထွန်းရဲ့တပည့် မိုးညိူ နဲ့ အကဲစမ်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်မျိုးဆက် ကျော်အောင်(ရတနာပုံ) ကတော့ STL က ဖိုက်တာ ကို နာမည်လိုက်မလိုက် သင်ပေါ်မှာမေးပြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမျိုးပွဲတွေအပြင် လေးချီ သုံးချီ အထူးပွဲတွေ (၁၀)
Messi : : ဘောလုံးလောကကြီးက ကျွန်တော့အပေါ်တင်နေတဲ့ အကြွေးကို ဆပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
Dec 13, 2017 MMSportNews
Interview : : ဘောလုံးလောကကြီးက ကျွန်တော့အပေါ်တင်နေတဲ့ အကြွေးကို ဆပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ===================================================== အာဂျင်တီးနားတို့ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီး ကျင်းပရာ ရုရှ မြေကို ချီတက်နိုင်ခဲ့ပါပီ ။ လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ ခြေစစ်ပွဲ ခရီးစဉ်တစ်လျောက်မှာ ဘယ် အာဂျင်တီးနားကစားသမားကမှ လီယွန်နယ် မက်ဆီ လောက် ကြီးလေးတဲ့ ဖိအားတွေကို မထမ်းပိုခဲ့ရပါဘူး ။ နိုင်ငံအသင်းအတွက် ထိုက်တန်တဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲကြီးဆီ ပို့ဆောင်ပေးအပြီးမှာတော့ မက်ဆီ ဟာ ဖီဖာ ရဲ့ အင်တာဗျုး ကို ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ် ။ ဒီအင်တာဗျုးမှာ အာဂျင်တီးနားကို ကမ္ဘာ့ဖလားဆီ ခေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးခြေစစ်ပွဲစဉ်အကြောင်း ၊ အာဂျင်တီးနားအသင်းအပေါ် မက်ဆီ ရဲ့ အမြင်တွေ
ရီးရဲယ်​မက်​ဒရစ်​အသင်းရဲ့ကစားသမား ​ရော်​နယ်​ဒိုဟာ ​အေစီမီလန်​အသင်းရဲ့တိုက်​စစ်​မူး အန်​ဒရီ​ဆေးလ်​ဗားကို လာမယ့်​ဇန်​နဝါရီတွင်​ ရီးရဲယ်​အသင်းသို့​ခေါ်ယူဖို့ ဥက္ကဋ္ဌ ဖ​လော့ရင့်​တီနိုပီရက်​ကို​ တိုက်​တွန်း​ပြောဆိုလိုက်​ပါတယ်​။ လက်​ရှိရာသီတွင်​ရီးရဲယ်​အသင်းရဲ့တိုက်​စစ်​မူး ဘန်​ဇီးမား ပုံမှန်​​ခြေစွမ်း​ပျောက်​ဆုံး​နေခဲ့ပြီး အားထားရတဲ့​တောင်​ပံကစားသမား ဂါရက်​​ဘေးကလည်းဒဏ်​ရာပြသနာများ​နှင့်​ရုန်းကန်​​​နေရခြင်း​ကြောင့်​ရီးရဲအသင်းအ​နေဖြင့်​တိုက်စစ်​မူးတစ်​ဦးထပ်​မံ​ခေါ်ယူဖို့လိုအပ်​​နေပါတယ်​။​​ရော်​နယ်​ဒိုက​တော့ တစ်​နိုင်​ငံထဲသား ​ဆေးဗားကို ​ခေါ်ယူ​စေလိုတယ်​လို့သိရပါတယ်​။ ရီးရဲယ်မက်​​ဒရစ်​အသင်းဟာလက်​ရှိရာသီ လာလီဂါတွင်​ အ​ဆင့်​၎တွင်​သာရပ်​တည်​လျက်​ရှိပြီး ဇယားထိပ်​မှဘာစီလိုနာအသင်းနှင့်​ ၈မှတ်​ကွာဟလျက်​ရှိ​နေပါတယ်​။ချန်​ပီယံလိဂ်ရူံးထွက်​အဆင့်​တွင်​လည်း ပီအက်​ဂျီ အသင်းနှင့်​ရင်​ဆိုင်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ ​ဆေးလ်​ဗားဟာ ​ပြီးခဲ့တဲ့​နွေရာသီအ​ပြောင်းအ​ရွေ့ကာလကယူရို၃၃သန်းဖြင့်​ ​ပေါ်တိုအသင်းမှ​​ ​အေစီမီလန်​အသင်းကို​ပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်​ပါတယ်​။ယခုနှစ်​တွင်​ ​ဆေးလ်​ဗားဟာ ​အေစီမီလန်​အသင်းအတွက်​ ၁၈ ပွဲကစားပြီး၇ဂိုးသွင်းယူ​ပေးထားတယ်​လို့သိရပါတယ်​။ ရီးရဲအသင်းဟာ အင်​တာမီလန်​အသင်းရဲ့တိုက်​စစ်​မူးအင်​ကာဒီ ကိုလာမည့်​ဇန်​နဝါရီအ​ပြောင်းအ​ရွေ့မှာ​ခေါ်ယူရန်​သတင်းများထွက်​​နေ​သော်​လည်း ​ရော်​နယ်​ဒိုက​တော့တစ်​နိုင်​ငံထဲသားဖြစ်​သူ​ဆေး​လ်​ဗားကို​ခေါ်ယူဖို့ ​တောင်းဆိုလိုက်တယ်​လို့သိရပါတယ်​။ Unicode လကျ​​ရှေးစငျ​အသငျး​ဖျော​ အနျ​ဒရီ​ဆေးလျ​​ဗားကို​ချေါယူ​ပေးရနျ​ပီရကျ​ဇျ​ကိုတိုကျ​တှနျးလိုကျ​တဲ့​ရျော​နယျ​ဒို =============== ရီးရဲယျ​မကျ​ဒရဈ​အသငျးရဲ့ကစားသမား ​ရျော​နယျ​ဒိုဟာ ​အစေီမီလနျ​အသငျးရဲ့တိုကျ​စဈ​မူး အနျ​ဒရီ​ဆေးလျ​ဗားကို လာမယျ့​ဇနျ​နဝါရီတှငျ​ ရီးရဲယျ​အသငျးသို့​ချေါယူဖို့ ဥက်ကဋ်ဌ ဖ​လော့ရငျ့​တီနိုပီရကျ​ကို​ တိုကျ​တှနျး​ပွောဆိုလိုကျ​ပါတယျ​။ လကျ​ရှိရာသီတှငျ​ရီးရဲယျ​အသငျးရဲ့တိုကျ​စဈ​မူး ဘနျ​ဇီးမား ပုံမှနျ​​ခွစှေမျး​ပြောကျ​ဆုံး​နခေဲ့ပွီး အားထားရတဲ့​တောငျ​ပံကစားသမား ဂါရကျ​​ဘေးကလညျးဒဏျ​ရာပွသနာမြား​နှငျ့​ရုနျးကနျ​​​နရေခွငျး​ကွောငျ့​ရီးရဲအသငျးအ​နဖွေငျ့​တိုကျစဈ​မူးတဈ​ဦးထပျ​မံ​ချေါယူဖို့လိုအပျ​​နပေါတယျ​။​​ရျော​နယျ​ဒိုက​တော့
2017/18 ချန်ပီယံလိဂ် ရှုံးထွက်အဆင့် မဲခွဲပွဲ ရလာဒ်များ
Dec 12, 2017 MMSportNews
* မဲခွဲခဲ့သည့်ပုံစံ ~~~~~~~~~ – အုပ်စုဗိုလ်ရတဲ့အသင်းတွေဟာ ရှုံးထွက်အဆင့် ပထမအကျော့ပွဲစဉ်ကို အဝေးကွင်းမှာ ကစားရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒုတိယအကျော့ပွဲကို အိမ်ကွင်းမှာကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ – ပထမအကျော့ပွဲစဉ်တွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၃ ရက်၊ ၁၄ ရက်နေ့တွေနဲ့ ၂၀ ရက်၊ ၂၁ ရက်နေ့တွေမှာ ကစားသမားမှာဖြစ်ပြီး – ဒုတိယအကျော့ပွဲစဉ်တွေကိုတော့ မတ်လ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်၊ ၁၃ ရက်နဲ့ ၁၄ ရက်နေ့တွေ့မှာ ကစားသွားမှာပါ။ – မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ကွားတားဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တွေကို မဲခွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ – ဧပြီလ ၃ ရက်၊ ၄ ရက်နေ့မှာ ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ပွဲတွေကို ကစားမှာ ဖြစ်ပြီး –